सरकारी कार्यालयको बेथिति, भत्ता खान महिनामै २२ बैठक! - Everest Dainik - News from Nepal
सरकारी कार्यालयको बेथिति, भत्ता खान महिनामै २२ बैठक!
काठमाडौं : सरकारी कार्यालयमा भत्ता खान कार्यालय समयभन्दा अघि-पछि बैठक बस्ने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी महिनामा २२ पटकसम्म बैठक बसेका छन् । यसरी बोर्डले १ वर्षमा ४३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
कार्यालय समयमा सम्पन्न गर्न सकिने विषयमा पनि छुट्टै बैठक बस्दा अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५७औँ प्रतिवेदनमार्फत् बैठकको संख्या घटाउँदै आर्थिक मितव्ययितता अपनाउन सुझाव दिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई दैनिक २ सय भत्ता
बोर्डले कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, परीक्षार्थीको अभिलेख सच्याउने तथा यससँग सम्बन्धित अन्य प्राविधिक काम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कार्यालय समयमै सम्पन्न हुन सक्ने पुनर्योग, अभिलेख सच्याउने, त्रुटि समाधानजस्ता नियमित काम गर्न पनि अघि–पछि पारेर बैठक बसेको जनाइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई दैनिक भत्ता !
एक वा दुई जनाको अभिलेख सच्याउने बहानामा पनि पटकपटक बैठक बसेको देखिएको छ । एक विषयको पुनर्योगका लागि पनि यसरी नै बैठक बसेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
बैठकको समयलाई लम्ब्याउन, भत्तामा बढी रकम खर्च गर्न आमन्त्रित सदस्यको संख्यासमेत बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट लिइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस सरकारी कर्मचारीको सबै प्रकारण भत्ता खारेज
ट्याग्स: भत्ता, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सरकारी कार्यालय